Kuverengwa kwechipiri kwemadzinza aIsraeri (1-65)
26 Denda parakapera,+ Jehovha akati kuna Mozisi naEriyezari mwanakomana wemupristi Aroni: 2 “Verengai ungano yese yevaIsraeri kubvira pane vane makore 20 zvichikwira, maererano nedzimba dzemadzibaba avo, vese vanokwanisa kupinda muuto raIsraeri.”+ 3 Saka Mozisi nemupristi Eriyezari+ vakataura navo murenje reMoabhi+ pedyo naJodhani kuJeriko,+ vachiti: 4 “Vaverengei kubvira pane vane makore 20 zvichikwira, sezvarayirwa Mozisi naJehovha.”+ Vanakomana vaIsraeri vakabuda munyika yeIjipiti vaiva: 5 Rubheni,+ dangwe raIsraeri; vanakomana vaRubheni+ vaiva: Hanoki, kwakabva mhuri yevaHanoki; Paru, kwakabva mhuri yevaParu; 6 Hezroni, kwakabva mhuri yevaHezroni; Kami, kwakabva mhuri yevaKami. 7 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaRubheni, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 43 730.+ 8 Mwanakomana waParu aiva Eriyabhi. 9 Uye vanakomana vaEriyabhi vaiva Nemueri, Dhatani, naAbhiramu. Ava ndivo vanaDhatani naAbhiramu vakasarudzwa paungano, vaya vakarwa naMozisi+ naAroni pamwe neboka raKora,+ pavakarwa naJehovha.+ 10 Nyika yakabva yavhurika* ikavamedza. Asi Kora akafa pamwe nevatsigiri vake pakaparadzwa varume 250 nemoto.+ Uye zvakaitika kwavari zvakava chidzidzo kune vamwe.+ 11 Asi vanakomana vaKora havana kufa.+ 12 Vanakomana vaSimiyoni+ maererano nemhuri dzavo vaiva: Nemueri, kwakabva mhuri yevaNemueri; Jamini, kwakabva mhuri yevaJamini; Jakini, kwakabva mhuri yevaJakini; 13 Zera, kwakabva mhuri yevaZera; Shauri, kwakabva mhuri yevaShauri. 14 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaSimiyoni: 22 200.+ 15 Vanakomana vaGadhi+ maererano nemhuri dzavo vaiva: Zefoni, kwakabva mhuri yevaZefoni; Hagi, kwakabva mhuri yevaHagi; Shuni, kwakabva mhuri yevaShuni; 16 Ozni, kwakabva mhuri yevaOzni; Erai, kwakabva mhuri yevaErai; 17 Arodhi, kwakabva mhuri yevaArodhi; Areri, kwakabva mhuri yevaAreri. 18 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevanakomana vaGadhi, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 40 500.+ 19 Vanakomana vaJudha+ vaiva Ere naOnani.+ Asi Ere naOnani vakafira munyika yeKenani.+ 20 Uye vanakomana vaJudha maererano nemhuri dzavo vaiva: Shera,+ kwakabva mhuri yevaShera; Perezi,+ kwakabva mhuri yevaPerezi; Zera,+ kwakabva mhuri yevaZera. 21 Uye vanakomana vaPerezi vaiva: Hezroni,+ kwakabva mhuri yevaHezroni; Hamuri,+ kwakabva mhuri yevaHamuri. 22 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzaJudha, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 76 500.+ 23 Vanakomana vaIsakari+ maererano nemhuri dzavo vaiva: Tora,+ kwakabva mhuri yevaTora; Puvha, kwakabva mhuri yevaPuni; 24 Jashubhi, kwakabva mhuri yevaJashubhi; Shimroni, kwakabva mhuri yevaShimroni. 25 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzaIsakari, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 64 300.+ 26 Vanakomana vaZebhuroni+ maererano nemhuri dzavo vaiva: Seredhi, kwakabva mhuri yevaSeredhi; Eroni, kwakabva mhuri yevaEroni; Jareeri, kwakabva mhuri yevaJareeri. 27 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaZebhuroni, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 60 500.+ 28 Vanakomana vaJosefa+ maererano nemhuri dzavo vaiva: Manase naEfremu.+ 29 Vanakomana vaManase+ vaiva: Makiri,+ kwakabva mhuri yevaMakiri; uye Makiri akabereka Giriyedhi;+ Giriyedhi, kwakabva mhuri yevaGiriyedhi. 30 Ava ndivo vaiva vanakomana vaGiriyedhi: Iezeri, kwakabva mhuri yevaIezeri; Hereki, kwakabva mhuri yevaHereki; 31 Asrieri, kwakabva mhuri yevaAsrieri; Shekemu, kwakabva mhuri yevaShekemu; 32 Shemidha, kwakabva mhuri yevaShemidha; Heferi, kwakabva mhuri yevaHeferi. 33 Zerofehadhi mwanakomana waHeferi akanga asina vanakomana, asi vanasikana chete,+ uye vanasikana vaZerofehadhi+ vaiva Mahra, Noa, Hogra, Mirika, naTiza. 34 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzaManase, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 52 700.+ 35 Ava ndivo vaiva vanakomana vaEfremu+ maererano nemhuri dzavo: Shutera,+ kwakabva mhuri yevaShutera; Bhekeri, kwakabva mhuri yevaBhekeri; Tahani, kwakabva mhuri yevaTahani. 36 Ava ndivo vaiva vanakomana vaShutera: Erani, kwakabva mhuri yevaErani. 37 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevanakomana vaEfremu, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 32 500.+ Ava ndivo vaiva vanakomana vaJosefa maererano nemhuri dzavo. 38 Vanakomana vaBhenjamini+ maererano nemhuri dzavo vaiva: Bhira,+ kwakabva mhuri yevaBhira; Ashbheri, kwakabva mhuri yevaAshbheri; Ahiramu, kwakabva mhuri yevaAhiramu; 39 Shefufamu, kwakabva mhuri yevaShufamu; Hufamu, kwakabva mhuri yevaHufamu. 40 Vanakomana vaBhira vaiva Adhi naNaamani:+ Adhi, kwakabva mhuri yevaAdhi; Naamani, kwakabva mhuri yevaNaamani. 41 Ava ndivo vaiva vanakomana vaBhenjamini maererano nemhuri dzavo, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 45 600.+ 42 Ava ndivo vaiva vanakomana vaDhani+ maererano nemhuri dzavo: Shuhamu, kwakabva mhuri yevaShuhamu. Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzaDhani maererano nemhuri dzavo. 43 Pamhuri dzese dzevaShuhamu, vakanyorwa vavo vaisvika 64 400.+ 44 Vanakomana vaAsheri+ maererano nemhuri dzavo vaiva: Imnaa, kwakabva mhuri yevaImnaa; Ishvhi, kwakabva mhuri yevaIshvhi; Bheria, kwakabva mhuri yevaBheria; 45 kuvanakomana vaBheria: Hebheri, kwakabva mhuri yevaHebheri; Marikieri, kwakabva mhuri yevaMarikieri. 46 Zita remwanasikana waAsheri raiva Sera. 47 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevanakomana vaAsheri, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 53 400.+ 48 Vanakomana vaNaftari+ maererano nemhuri dzavo vaiva: Jazeeri, kwakabva mhuri yevaJazeeri; Guni, kwakabva mhuri yevaGuni; 49 Jezeri, kwakabva mhuri yevaJezeri; Shiremu, kwakabva mhuri yevaShiremu. 50 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzaNaftari maererano nemhuri dzavo, uye vanhu vavo vakanyorwa vakasvika 45 400.+ 51 Ava ndivo vese vakanyorwa pavaIsraeri: 601 730.+ 52 Pashure paizvozvo Jehovha akati kuna Mozisi: 53 “Nyika inofanira kugovewa pakati pavo kuti ive nhaka yavo maererano nemazita akanyorwa.+ 54 Vanenge vakawanda, unofanira kuwedzera nhaka yavo, uye vanenge vari vashoma unofanira kuderedza nhaka yavo.+ Boka rimwe nerimwe rinofanira kupiwa nhaka zvichienderana nekuwanda kwevaya vakanyorwa. 55 Asi nyika yacho inofanira kugovewa pachishandiswa mujenya.+ Vanofanira kuwana nhaka dzavo zvichienderana nemazita emadzinza emadzibaba avo. 56 Nhaka imwe neimwe ichasarudzwa kuti inopiwa ani pachishandiswa mujenya, ichigoverwa mapoka akakura uye madiki.” 57 Ava ndivo vaRevhi+ vakanyorwa maererano nemhuri dzavo: Geshoni, kwakabva mhuri yevaGeshoni; Kohati,+ kwakabva mhuri yevaKohati; Merari, kwakabva mhuri yevaMerari. 58 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaRevhi: mhuri yevaRibhini,+ mhuri yevaHebroni,+ mhuri yevaMari,+ mhuri yevaMushi,+ mhuri yevaKora.+ Kohati akabereka Amramu.+ 59 Uye mudzimai waAmramu ainzi Jokebhedhi,+ mwanasikana waRevhi, waakaberekerwa nemudzimai wake muIjipiti. Uye iye naAmramu vakabereka Aroni naMozisi nehanzvadzi yavo Miriyemu.+ 60 Aroni akaberekerwa Nadhabhi, Abhihu, Eriyezari, naItamari.+ 61 Asi Nadhabhi naAbhihu vakafa nekuti vakauya nemoto wakanga usingabvumirwi pamberi paJehovha.+ 62 Vanhurume vese vaibvira pamwedzi mumwe chete zvichikwira vakanyorwa vakasvika 23 000.+ Havana kunyorwa pakati pevaIsraeri,+ nekuti hapana nhaka yavaizopiwa pakati pevaIsraeri.+ 63 Ava ndivo vanhu vakanyorwa naMozisi nemupristi Eriyezari pavakanyora vaIsraeri murenje reMoabhi pedyo naJodhani kuJeriko. 64 Asi pakati pavo pakanga pasina kana murume mumwe chete pane vaya vakanyorwa naMozisi nemupristi Aroni pakaverengwa vaIsraeri murenje reSinai.+ 65 Nekuti Jehovha akanga ati nezvavo: “Chokwadi vachafira murenje.”+ Saka hakuna kusara kana murume mumwe chete kwavari kunze kwaKarebhi mwanakomana waJefune naJoshua, mwanakomana waNuni.+